Ny hiram-pirenena japoney: Kimigayo
Fiteny History & Culture
Ny hiram-pirenena japoney (kokka) dia "Kimigayo." Raha nanomboka tamin'ny taona 1868 ny vanim-potoan'i Meiji ary i Japan dia nanomboka ny fireneny ho toy ny firenena maoderina, tsy misy ny hiram-pirenena japoney. Raha ny marina, ilay olona nanantitrantitra ny filàn'ny hiram-pirenena dia mpilalao britanika miaramila, John William Fenton.
Teny amin'ny hiram-pirenena japoney
Ny teny dia nalaina avy amin'ny tononkalo (31-sylaable) hita tao amin'ny Kokin-wakashu, tononkalo fanoherana tamin'ny taonjato faha-10.
Ny mozika dia nahitana ny Hiramori Hayashi, mpiangaly mozika Imperial taona 1880 ary nifanaraka tamin'ny fomba ofisialy nataon'i Franz Eckert, mpandranto alemà. "Kimigayo (Ny Fanjakana Babylonianina)" dia lasa hiram-pirenena Japoney tamin'ny taona 1888.
Ny teny hoe "kimi" dia manondro ny Emperora ary ny teny dia ahitana ny vavaka hoe: "Ho mandrakizay anie ny fanjakan'ny Emperora." Ny tononkalo dia nahitana ny vanim-potoana nanjakan'ny Emperora teo amin'ny vahoaka. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, dia fitondram-panjaka tanteraka i Japana izay nanosika ny Emperora ho any an-tampony. Nanafika ny firenena Aziatika ny Tafika Imperial Japone. Ny antony nanosika azy ireo dia niady ho an'ny Emperora Masina izy ireo.
Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, ny Emperora dia lasa mariky ny Japonin'ny Lalàmpanorenana ary very ny hery politika rehetra. Nanomboka hatreo ny fanoherana maro samihafa dia natsangana tamin'ny fihirana "Kimigayo" ho hira faneva. Na izany aza, mbola mijanona ao amin'ny fetim-pirenena, hetsika iraisam-pirenena, sekoly, ary amin'ny fialantsasatry ny firenena amin'izao fotoana izao.
Koke no musu
Enga anie ny fanjakan'ny Emperora
mitohy hatramin'ny taranaka arivo sy iray alina, valo arivo
ary ho an'ny mandrakizay izay ilainy
ho an'ny vatokely madinika hambolena vato lehibe
ary rakofa môtô.
Fantaro ny fomba fihira ny "Happy Birthday" amin'ny teny alemana
Ny Lovan-tsahala Italianina Italiana
Mankalaza ny Paka amin'ny teny Japoney
Giri - Fepetra ara-moraly
Tombam-bola sy volavolam-bola ho an'ny firenena Espaniola
Ny dikan'ny anarana Alemana malaza
Learn the German Lyrics for "Edelweiss"
Tantaran'i Krismasy ho an'ny teny espaniola
Ny mahery fo amerikana izay nanao tantara
Text of the 1949 UN Resolution Calling for a Referendum on Kashmir
Bola amin'ny banky sy ny indostria ara-bola
'Gracias' sy 'Fahasoavana'
Rahoviana no eo ny tolakandro?
Famaritana ho an'ny besinimaro sy ohatra amin'ny argument
15 Sakafo mahatsikaiky izay azo antoka hivezivezy eo amin'ny lakandrano amin'ity fahavaratra ity
Fomba hanatsarana ny lamosinao
Fikarohana vehivavy manan-tantara amin'ny alàlan'ny taratasiny sy diariny
Moa ve ny Kristianina manamarina ny finoana na ny asa?
Hamafiso ny tranokalan'ny sekolinao
NaN, Infinity, ary Zafy amin'ny Zero ao amin'ny VB.NET
Ahoana ny fampiasana ny teny frantsay amin'ny teny frantsay hoe 'Tout à Fait'
Fananarana ara-panahy: Fivavahana
Ny Ady Frantsay & Indiana / Ny Ady An-tranomaizina: Andininy
Ny foibem-paritra 695MB, 695CB sy 775.CB
Top 10 Movies Johnny Depp
Inona no Bushido?
Fomba hanangonana kayak